अभिनेत्री पुजाले किन काटेकि थिइन् गायक सुगम पोख्रेलको नाममा हात ? - www.dthreeonline.com
अभिनेत्री पुजाले किन काटेकि थिइन् गायक सुगम पोख्रेलको नाममा हात ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: १७:०३:५५
ईटहरी/ सम्भवत नेपालमा राजनिती क्षेत्र र चलचित्र क्षेत्रको तुलना गर्ने हो भने बराबर चर्चा भैरहेको हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र पछाडी धकेलिए पनि राजनीति क्षेत्र भने चलायमान छ । तर, चलचित्र क्षेत्रका हस्तिहरुको चर्चा र आलोचना भने निरन्तर भैरहेको नै छ । यो बिचमा चर्चा र आलोचनामा आईरहने नायिका हुन् पुजा शर्मा ।
पुजा र आकाशको सम्बन्ध बिग्रीएको खबरले मिडिया तात्यो तर, फेरि यो जोडिले म्युजिक भिडियोहरु संगै खेल्न थालेपछि फ्यानहरु खुसी छन् । यता पुजाको ब्यस्तता बढ्न थालेको छ । महामारीमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसंगै उनी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दैछिन् । यता कमेडी टेलिभिजन रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा समेत गेस्टको रुपमा पुगेकी छन् ।
गएको शुक्रबार प्रसारण भएको एपिसोडमा देखिएकी उनले कुनै बेला ‘एस प्लस पि’ लेखेको कुरा सम्झिइन् । एक प्रतिष्पर्धीले आफ्नो प्रस्तुतीको क्रममा भनेको कुरालाई जोड्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । यस्तै आफुले गायक सुगन पोख्रेलको नाममा हात काटेको समेत खुलाएकी छन् । आफू सो बेलामा सुगम पोख्रेलको ठूलो फ्यान भएको र यी कार्यहरु गरेको भन्दै उनले आफ्नो बिगत कोट्याएकी थिइन् ।